‘गुनगुन’ मा ‘चम्क्यो तारा चमक्क’, संचिताको नाच कस्तो ? « Ramailo छ
‘गुनगुन’ मा ‘चम्क्यो तारा चमक्क’, संचिताको नाच कस्तो ?
फिल्म ‘गुनगुन’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक कथामा निर्माण भएको यस फिल्मको दोस्रो गीतमा संचिता लुइँटेल र सन्नी ढकाल प्रस्तुत छन् । यी दुईको प्रेमभावलाई गीतमा चित्रण गरिएको छ । भिडियो हेर्नुस् :
सार्वजनिक ‘चम्क्यो तारा चमक्क’ बोलको गीतमा प्रदीप भट्टराईको शब्द, विकास चौधरीको संगीत र मेलिना राई तथा दौलत राइको स्वर रहेको छ । गीतलाई रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् भने यसलाई सौरभ लामाले छायाँकन गरेका छन् ।
फिल्म गुनगुनमा संचिता र सन्नीसँगै निर्देशक तथा निर्माता पुकार भट्टराई , नायक सुवास मेचे रविन्द्र प्रताप सेन, नविन श्रेष्ठ, गणेश जिसी, देशभक्त खनाल, अनु भण्डारी, सुमेश श्रेष्ठ, राधा दाहाल, भिम मैनाली, बाल्दिप राई, विपिन प्रसाई लगायतको अभिनय रहेको छ । कार्तिक ३० बाट प्रदर्शनमा आउने फिल्मले समाजकै घटनालाई चित्रण गर्ने निर्देशकले बताए । ‘कथा सामाजिक नै हो, प्रस्तुतिमा केहि भिन्नता ल्याउने कोसिस छ’ भट्टराईले फिल्मलाई दर्शकले रुचाउने बताए ।
प्राथना फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको फिल्ममा हिमाल केसीको द्वन्द, अर्जुन जिसीको सम्पादन र सौरभ लामाको छायाँकन रहेको छ ।